Archive de l'auteur | NewsMada | Page 1511
Kitra – “Ballon d’or 2015” : namoa-tsampona indray ny Fifa
Par Taratra sur 08/01/2016 NS Malagasy, NS-Sports
Nanaotao foana indray ny federasiona iraisam-pirenen’ny baolina kitra (Fifa), omaly. Nivoaka tao anatin’ny tranonkalan’ity andry voalohan’ny kitra eran-tany ity mantsy fa i Lionel Messi hahazo ny “Ballon d’or 2015”. Zava-doza ny nataon’ireo tomponandraikitra eo anivon’ny federasioan iraisam-pirenen’ny baolina kitra (Fifa). Namoaka ny anaran’ny mpilalao hahazo ny “Ballon d’or 2015” tao amin’ny tranonkalam-pifandraisany mantsy izy ireo. […]
Par Taratra sur 08/01/2016 Economie, NS Malagasy
Tohizina ny tetikasa efa natomboka. Hirosoana hatrany koa ny haha matihanina ireo rantsa-mangaikan’ny fizahantany sy ny fampandrosoana. Anisan’ny nisongadina ireo nandritra ny fifamindram-pahefana teo amin’ny filoha vaovaon’ny filankevi-pitantanan’ny Ofisim-paritry ny fizahantany eto Analamanga (Ortana) sy ny mpitantana teo aloha. Hatsaraina hatrany ny tolotra omen’ny Ortana amin’ny alalan’ny fampidirana ireo voakasiky ny tontolon’ny fizahantany ho eo […]
Ravalomanana : « Manohana ny fitakiana ireo Iles Eparses aho »
Nivoaka amin’ny fanginany ary naneho hevitra tamin’ny mpanao gazety ny filoha teo aloha, Ravalomanana, omaly teny Faravohitra. Noresahiny ny fifidianana loholona farany teo sy ny momba ireo Nosy manodidina. « Manohana aho rehefa antsika ireo Nosy ireo… Tsy azo ekena izany taninao lasan’olon-kafa izany. Voahitsakitsaka amin’ny fananantsika isika… », hoy izy. Ankoatra izany, nahitsy ny fanehoan-keviny […]
Vita, omaly tao amin’ny minisiteran’ny Fitantanambola sy ny tetibola, ny fanaovan-tsonia fanomezan’ny Agence française de développement (Afd) ny fanjakana malagasy ho fanampiana ny sehatry ny fambolena sy ny fizahantany. Niara–nanao sonia ny masoivoho frantsay, Vouland-Aneini, sy ny minisitra Rakotoarimanana Gervais. Faritra Vakinankaratra, Alaotra, Vatovavy Fitovinany ary Atsimo Atsinanana. Ireo no faritra hanaovana tetikasa manokana ho […]
Par Taratra sur 08/01/2016 NS Malagasy, NS-Culture
Na vao manomboka aza ny taona, efa matevina ny fandaharam-potoana sy ireo ara-kolontsaina sy ara-javakanto etsy amin’ny Institut français de Madagascar (IFM) etsy Analakely. Hisantatra izany ary anisan’ny vaovao lehibe eo amin’ny tontolon’ny asa soratra, ny hivoahan’ny sanganasan’i Michèle Rakotoson, mpanoratra tsy zovina amin’ny maro intsony. “Madame à la campagne” no lohatenin’ity boky ity; asa […]
Toliara : manao antso fanairana momba ny fifidianana ny Fitiba
« Mampaneno lakolosy izahay manoloana ny tranga niseho tamin’ny fifidianana loholona farany teo. Tsy mpanohitra ny fitondrana izahay, saingy miantso ny raiamandreny eto amin’ny firenena, ny filoha, ny praiminisitra, ny Ceni ary ny HCC mba hijery izany », hoy ny kandidàn’ny Fitiba, Nakany Charly, omaly tetsy Ankorondrano, nanoloana ny mpanao gazety. Notanisainy amin’izany ireo tsy fanarahan-dalàna samihafa […]
HVM –Faritra V7V : « Fanambaniana mpifidy vaventy ny nataon’ireo resy »
Nitondra fanazavana, tao Le Louvres Antaninarenina omaly, ny mpikambana ao amin’ny HVM avy any amin’ny faritra Vatovavy Fitovinany, nitsipaka tanteraka ny fandotoana azy ireo tamin’ny fifidianana loholona, ny 29 desambra lasa teo, indrindra tao amin’ny kaominina Vohipeno sy Ambila. « Fanambaniana mpifidy vaventy ireny filazana nataon’ny vondron’olona resy ireny ; politika hikotrehana fanakorontanana », hoy ny minisitry ny […]
Amparafaravola sy Tsiroanomanddiy : olona roa indray no matin’ny pesta
Tao anatin’ny roa herinandro farany, olona roa no matin’ny aretina pesta miseho amin’ny atoditarimo. Nahitana tranga roa tao amin’ny distrikan’Amparafaravola ka iray tamin’ireo namoy ny ainy. Efa razana tsy misy aina intsony no nentin’ny fianakaviana teny amin’ny tobim-pahasalamana, araka ny fanazavana azo. Nisy tranga koa tany amin’ny distrikan’i Tsiroanomandidy ary maty ivelan’ny hopitaly ihany koa […]
« Précédent 1 … 1 509 1 510 1 511 1 512 1 513 … 1 516 Suivant »